May 16, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Dowladda Soomaaliya oo agab loogu talagalay ka hortagga COVID-19 ka guddoontay dowladda Qatar+Sawirro
Soomaaliya May 16, 2020
Muqdisho.(SONNA):- Diyaarad ciidan oo ay leedahay dowladda Qatar islamarkaana sidday qalabka looga hortago faafitaanka cudurka COVID 19 ayaa galabta soo cagadhigatay garoonka caalamiga ah Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, waxaana deeqdaasi la wareegtay Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka ee Xukuumadda .Federaalka. Soomaaliya Fowziyo Abuukar Nuur. Munaasabaddii deeqdaasi Sii akhriso
Wasiirka Caafimaadka Oo Ku Baaqday in laga qeyb qaato Dadaallada Lagu Xakameynayo Faafitaanka Feyruska Karoona
Muqdisho.(SONNA):- Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada XFS, Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa xaqiijisay in la diiwaan geliyay 73 xaaladood oo COVID-19 ah, 13 qofood oo xanuunka ka boqsootay iyo 2 bukaan oo u geeriyooday. Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa sheegtay in xaaladaha cusub laga diiwaan geliyay Puntiland 25, Somaliland 19, gobalka Banaadir 17 iyo Koonfur […]Sii akhriso
Somali News May 16, 2020
Mogadishu(SONNA)- H. E. Abdi Ashur Hassan, Minister for Post, Telecom, and Technology, has welcomed the 2Africa subsea cable initiative, which will be one of the world’s largest subsea cable projects that will interconnect Europe, the Middle East, and 21 landings in 16 countries in Africa. The 2Africa cable is an initiative of China Mobile International, […]Sii akhriso
Muqdisho:(SONNA)-Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta & Teknolojiyada, Md. Eng Cabdi Cashuur Xasan, ayaa soo dhoweeyay mashruuca xarigga internetka 2Africa, oo la filayo inuu noqdo mid ka mid ah kuwa ugu dheer xargaha internetka ee badda hoosteeda mara, kaas oo isku xiraya Yurub, Bariga Dhexe iyo 16 dal oo ka tirsan qaaradda Afrika. Mashruucan ayaa waxaa iska kaashanaya Sii akhriso
Cayaaraha May 16, 2020
(London) 16 Maaajo 2020. Tababarihii hore ee Arsenal, Unai Emery ayaa mar kale eedeyn dusha kaga tuurray Mesut Ozil, isagoo ku eedeeyay hab dhaqankiisa iyo ka go’naasho la’aanta xilligii ay wada shaqeynayeen, isagoo sidoo kale sheegay in safka kooxda ay diideen inuu kabtan u noqdo. Emery ayaa laga ceyriyay shaqada Arsenal kaddib markii ay kooxdu […]Sii akhriso
(Brazil) 16 Maaajo 2020. Su’aal kama taagna in Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi ay yihiin kuwii ugu wanaagsanaa ee xilligooda, iyadoo xitaa lagu doodi karo inay ku jiraan xiddigaha ugu maqaamka sarreeya kubadda cagta, si la mid Neymar Jr ayaa ah xiddig kale oo aad u sarreeya. Markaa sheekadaas laga soo tago waxaa jira xiddigo […]Sii akhriso
Caalamka oo tartan adag ugu jira soo saarista tallaal loga hortaggayo Corona Virus.
Muqdisho:(SONNA)-Caalamka ayaa tartan uga jira sidii lo soo saari laha tallaalka Corona Virus xilli Mareykanka iyo Yurub laga filayo in ay ku guleeysan karaan soo saarista tallaalkan dhammaadka sanadkan. Midowga Yurub ayaa dhawaan ku dhawaaqay in waddamada Yurub ay u fududeeyaan tallaabooyinka go’doominta ee loga gol lahaa ka hortaga faafida Cudurka Sii akhriso
(Milan) 16 Maajo 2020. Heshiiska dhinacyada badan taabanaya ee ay Barcelona ku soo qaadaneyso Lautaro Martinez ayaa marxald xasaasi ah maraya, iyadoo labada koox ee Inter Milan iyo Barca wada doonayaan inay heshiiskan siyaabo kala duwan kaga faa’ideystaan. Inter ayaa ku adkeysanaysay in Barcelona ay bixiso lacagaha heshiiska Martinez lagu jabin karo, iyadoo kooxda Sii akhriso
Gonzalo Higuain oo ugu dambeyn ku soo laabtay Turin, iyo sabab muhiim ah oo uu ku soo daahay
(Turin) 16 Maaajo 2020. Weeraryahanka kooxda Juventus ee Gonzalo Higuain ayaa ugu dambeyn ku soo laabtay kooxdiisa, kaddib labo bilood oo uu ku sugnaa dalkiisa Argentina. Laacibkan ayaa soo gaaray dalka Talyaaniga galabtii Jimcaha, waxaana uu mari doonaa baaritaan la xiriira coronavirus ka hor inta uusan galin labo toddobaad oo karaantiil ah. Muddada uu ku […]Sii akhriso
Ciidanka Xoogga oo heshiis dhex dhigay beelo ku dagaalamay Mudug
Mudug.(SONNA)… Taliyaha Qaybta 21-aad ee Ciidanka Xoogga dalka General C/Casiis C/laahi Cabdi “Qooje” ayaa sheegay in lagu guulestay heshiis hordhac ah oo la dhax dhigay beelo ku dagaalamay deegaanka Laas-Gacameey oo 15-Km u jira Magaalada Bacaadweyne ee Gobolka Mudug. Taliyaha ayaa sheegay in ay si buuxda ugu guuleysteen in Sii akhriso